Mapurisa Anotora Nhengo yeMDC Inomirira Marondera Central
Nhengo yeMDC inomirira Marondera Central mudare reparamende, VaIan Kay, neChishanu vakatorwa nemapurisa ayo anoti ainge achitsvaga zvinodhaka, pfuti uye mishonga yange yapfuura mazuva ainofanira kupihwa varwere.
Mapurisa aya akafumira kumba kwaVaKay muHarare neChishanu vachibva vatanga kusecha imba yose. Vakazotakura VaKay ndokuenda navo kuHarare Central Police Station, uye zvinonzi vachaendeswa kwaMutoko uko kunonzi vakaendesawo mimwe mishonga yange yapfuura nguva yakatarwa.
Mudzimai waVaKay, Amai Kerry Kay, vanoti hapana chakaipa pamishonga iyi iyo vanoti yakapihwa VaKay nemasangano emachechi ekuAmerica kuti vabatsire zvipatara zvemuZimbabwe zvisina mishonga.
Imwezve nhengo yeMDC, VaMarvellous Khumalo, vanonzi vakarohwa neChina kuNew Ambassador Hotel muHarare nevatsigiri veZanu-PF, avo vanonzi vanosanganisira, VaTongai Kasukuwere, munin’ina wegurukota rezvekuendesa hupfumi kuvatema, VaSaviour Kasukuwere.
VaKhumalo vaiita musangano wezvekunyorwa kwebumbiro remitemo nevamwe vechidiki. Vatsigiri veZanu-PF ava havana kufara nekuti VaKhumalo vainge vati zvirango zvikuru iZanu-PF nemutungamiri webato iri, VaRobert Mugabe.
Studio7 haina kukwanisa kubata VaTongai Kasukuwere nevamwe vavo kuti tinzwe divi ravo.